बिबाह पछि युवतीहरूको शरीर मा यसकारण आउछ परिबर्तन ? यस्ता छन् १० रोचक परिवर्तन – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/बिबाह पछि युवतीहरूको शरीर मा यसकारण आउछ परिबर्तन ? यस्ता छन् १० रोचक परिवर्तन
विवाह पछि युवतीहरूमा मानसिक, भावनात्मक र शरीरिक परिवर्तन आउँछ । युवतीहरूको शरीर रिप्रोडक्शनको लागि बनेको हुन्छ । परिपक्क उमेर पश्चात् उनीहरूमा ओभुलेशन अर्थात् अण्डा बन्ने प्रक्रिया शुरू हुन्छ । महिनावारीको शुरुवात हुन्छ र गर्भधारणको लागि तयार हुन्छन् । विवाह पछि रिप्रोडक्टिभ आर्गेन्स पनि पहिलेको तुलनामा बढी परिपक्क हुन्छ ।
विवाह पछि युवतीहरूमा के परिवर्तन आउँछ?
१-वजन बढ्नु- विवाह पछि युवतीहरूमा हार्मोनल परिवर्तन आउँछ । यसबाट भोक बढ्छ, बोसो जम्मा हुनथाल्छ र वजन बढ्छ ।२-बोसो बढ्नु- विवाह पछि युवतीहरूको शरीरमा बोसो बढ्छ । पेट, तिघ्रा, कुहिनो र छातीमा बढी बोसो जम्मा हुन्छ ।३-कपला बढ्नु- विवाह पछि युवतीहरूमा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्सको स्तर निकै बढ्छ । यसको कारण कपाल बाक्लो र कालो हुन्छ ।
४-महिनावारीमा परिवर्तन- महिनावारीको चक्रमा कुनै परिवर्तन हुँदैन तर हर्मोन्स सक्रिय हुनुको कारण ढिलो वा पहिले नै हुनसक्छ ।५-संवेदनशिलता – विवाह पछि युवतीहरूको शरीरको संवेदनशिलतामा पनि परिवर्तन आउँछ । उनीहरू स्पर्श प्रति बढी संवेदनशील हुन्छन् ।
६-चम्किलो त्वचा- विवाह पछि युवतीहरूमा कयौँ यस्ता हर्मोन्स निर्माण हुन्छन्, जसको कारण त्वचा नरम, चम्किलो र स्वस्थ हुन्छ ।७-स्वस्थ मुटु- विवाह पछि युवतीहरूको शरीरमा एस्ट्रोजन नामक हार्मोनको स्तर बढ्छ । यसले मुटुको रक्षा गर्छ ।८-शरीरको गन्धमा परिवर्तन- विवाह पछि महिलाको शरीरमा एस्ट्रोजन बढ्छ । यसको कारण शरीरको गन्ध तीव्र हुन्छ ।
९-मस्तिष्क सक्रिय र स्वस्थ- हार्मोन्स सक्रिय हुने र तनाव र चिन्ता कम हुने कारणले मस्तिष्क पनि बढी सक्रिय र स्वस्थ हुन्छ ।१०- रिप्रोडक्टिभ आर्गेन्समा परिवर्तन- विवाह पछि जेनिटल आर्गेन्स र रिप्रोडक्टिभ आर्गेन्स प्रेग्नन्सीको लागि तयार हुन्छ र उनीहरूमा परिवर्तन आउँछ ।
विवाहको सिजन सुरु भयसङ्गै सुनको भाउ सोच्नै नसकीने गरी यस्तो भयो, हेर्नुहोस् बिवरण